UPDATE: Ururka Daacish oo ku dhawaaqay hoggaamiye cusub, kaddib dilkii Al-Baghdadi | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Ururka Daacish oo ku dhawaaqay hoggaamiye cusub, kaddib dilkii Al-Baghdadi
UPDATE: Ururka Daacish oo ku dhawaaqay hoggaamiye cusub, kaddib dilkii Al-Baghdadi
Syria (Halqaran.com) – Ururka ISIS oo ku magac dheer Daacish ayaa si rasmi ah u xaqiijisay geerida Abu Bakr Al-Baghdadi oo dhawaan Ciidanka Mareykanka ay sheegeen in ay ku dileen howlgal qorsheysan oo ka dhacay Suuriya.
Sidoo kale, ururka Daacish ayaa ku dhawaaqday qofkii badali lahaa Baqdaadi oo lagu Magacaabo Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 27-dii Bishaan ku dhawaaqay in hogaamiyihii ururka ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, lagu dilay weerar milatariga Mareykanku ka fuliyay Sabtidii Gudaha Syria.
Hoggaamiyihii Ururka ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, ayaa noqday ninkii loogu doon doonista badnaa dunida.
hoggaamiye cusub yeelatay